AMD yakazivisa mhando yayo nyowani Zen 3 CPU uye RDNA 2 GPU zvivakwa zvaizopedzisira zvichipa simba rinotevera-chizvarwa desktop Ryzen 4000 processor uye Radeon RX Navi 2X makadhi emifananidzo kuFAD 2020.Zvino mishumo kubva kune chimwe chedu masosi inoratidza kuti ese desktop desktop & makadhi emifananidzo akarongerwa kuvhurwa muna Gumiguru we2020.
AMD Ryzen 4000 'Zen 3 Vermeer' CPUs & Radeon RX Navi 2X 'RDNA 2' GPUs Inotarisirwa YeDesktop Launch muna Gumiguru 2020
Sekureva kwesosi, chiziviso cheZen 3 based Ryzen 4000 'Vermeer' CPUs uye RDNA 2 yakavakirwa Radeon RX Navi 2x makadhi emifananidzo aizoitwa vasati vaburitswa saka tiri kutarisa chero Nyamavhuvhu kana Gunyana sechiziviso chikuva asi chinonyanya kushamisa kunzwa ndechekuti maCCU & maGPU aizovhura panguva imwe chete.
Inotaridzika se AMD inoda kuve nehuviri-hwekupedzisira CPU / GPU mapuratifomu anowanikwa pazuva rimwe chete kuti vanhu vanovaka maPC matsva vaende vese-AMD zvichibva mukuita kwayo inotevera-chizvarwa chigadzirwa mutsara. Izvo zvinogona kuve zvinokatyamadza kwazvo ne AMD kana vakakwanisa kuidhonza padivi reGPU chingave chiri chokwadi kupihwa zvazvino uno zvinopa kuti AMD's RDNA 2 mureza GPUs ichave inokwikwidza mumakwikwi makuru e-4K department. Pachine imwe nguva kusvika Q3 / Q4 2020 saka isu tichazopihwa rumwe ruzivo munzira neAMD pane zvinotevera-chizvarwa zvigadzirwa asi iyo info yatinayo kusvika ikozvino inotaurwa pazasi.
Hezvino Zvese zvatinoziva nezve AMD's Zen 3 Yakavakirwa Ryzen 4000 'Vermeer' Desktop CPUs
Iyo AMD Zen 3 yekuvakisa inonzi inonyanya kuve yakakura CPU dhizaini kubva pakutanga Zen. Icho chip icho chakashandurwa chose kubva kuboka kumusoro uye rinotarisa zvinhu zvitatu zvakakosha ayo anosanganisira Anokosha IPC Kuwana, Anokurumidza Clocks & Yepamusoro Kubudirira.
AMD yasvikira zvino vakazvisimbisa ivo kuti Zen 3 inounza nyowani CPU yekuvakisa iyo inobatsira kuburitsa akakosha IPC mibairo, inokurumidza wachi uye kunyange yakakwirira yakakosha nhoroondo kupfuura nakare kose. Vamwe runyerekupe vakatotaura nezve 17% kuwedzera muIPC uye kuwedzera kwe50% muZen 3's inoyerera-po yekushanda pamwe nekugadzirisa kukuru kwe cache.
Paakabvunzwa nezvekuti ndeupi rudzi rwekuita anowana Milan's CPU basic Microarchitecture, iyo inozivikanwa seZen 3, ichaendesa hukama neZen 2 Microarchitecture iyo Roma inovimba nayo maererano nemirayiridzo yakaitwa paPCU wachi kutenderera (IPC), Norrod akaona izvo - zvakasiyana Zen 2, yaive yakawanda yekushandurwa kweZen Microarchitecture iyo inopa masimba ekutanga-gen Epyc CPU - Zen 3 ichave yakavakirwa patsva.
Norrod haana kukwaniswa kutaura kwake nekutaura kuti Zen 2 yakaunza hukuru hweIPC kupfuura izvo zvakajairidzwa pakuvandudzwa - AMD yati ingangoita gumi neshanu muzana paavhareji - sezvo yakazotanga dzimwe pfungwa idzo AMD pakutanga yaive neZen asi yaifanira kuenda pairi bhodhi yekucheka. Nekudaro, akasimbisawo kuti Zen 15 ichaunza mabudiriro ekuita “zvinoenderana neizvo iwe zvaungatarisira kubva kune imwe nyowani nyowani.”
Dzimwe runyerekupe dzakataura kune kuwedzera makumi mashanu muzana mukuyerera kwepasita. Tave zvakare nekuona shanduko huru kumagadzirirwo e cache mune imwe EPYC mharidzo, iyo yairatidza kuti Zen 50 ichave ichipa yakabatana cache dhizaini iyo inofanirwa chaizvo kupeta cache iyo imwe Zen 3 musimboti inogona kuwana kana ichienzaniswa neZen 3. MuZen 2, imwe neimwe yeCCD inoumbwa neCCX mbiri, neCCX imwe neimwe iine imwe 2 MB L16 cache, kunyangwe iyoCCD ine 3 MB L32 cache. NaZen 3, iyo yose 3 MB + L32 Cache ichavepo kune vese CCX uye cherechedza kuti Zen 3 inogonawo kutakura kupfuura 3 MB ye cache sezvakataurwa mu slide.
MaCPU anotarisirwawo kukwira kusvika pamazana mazana matatu nemazana maviri nemazana matatu emahara MHz inofanirwa kuunza Zen 200 yakavakirwa maRyzen processors padyo ne300th Generation Intel Core yezvipiriso. Izvo, pamwe nekuwedzera kukuru kweIPC uye kuchinja kwakawanda kumagadzirirwo ezvakavakwa, zvaizoguma nekukurumidza nekuita kwakawanda kupfuura iripo Ryzen 3 processors iyo yakatoita kusvetuka kukuru pamusoro peRyzen 9 neRyzen 3000 processors ichiri chigadzirwa chinoshanduka kwete kuchinjika, se AMD. yakaratidzwa pachena munguva pfupi yapfuura.
Chinhu chakakosha kufunga nezvacho ndechekuti tichaona kudzoka kweye chiplet architecture uye AMD ichengetedze rutsigiro pane iripo AM4 socket. Iyo AM4 socket yaifanira kugara kusvika 2020 saka zvingangoita kuti Zen 3 yakavakirwa Ryzen 4000 CPUs ndiyo ichave yekupedzisira mhuri kushandisa socket pamberi AMD isati yaenda kuAm5 iyo yaizogadzirwa zvakazotevera tekinoroji senge DDR5 uye PCIe 5.0. AMD's X670 chipset yakaverengerwa sekusvika pakupera kwegore rino uye ichave yakawedzerwa PCIe Gen 4.0 rubatsiro uye yakawedzera I / O muchimiro chemazhinji M.2, SATA, uye USB 3.2 ports.
Kana ari zvemakwikwi, AMD Ryzen 4000 'Zen 3 Vermeer' mutsara waizokwikwidza neIntel ichakurumidza kuburitswa Comet Lake-S uye iyo inouya Rocket Lake-S desktop processors. Kubata iyo Intel Comet Lake-S hakuzovi kwakanyanya kuoma sezvo maRyzen 3000 CPU ari makwikwi kumisidzana nerudzi rwese sezvinoonekwa kubva ku performance ichangoburwa asi Rocket Lake-S inoita kunge yakakura kuvaka kuvaka kweIntel (kunyangwe ichiri pamusoro pe14nm process) iyo ingangove nzira yeIntel yekudzoka mumusika we desktop desktop.
With that said, Rocket Lake-S ichiri chinhu chinoda kuongororwa isati yaburitswa isu tisati tachaidaidza kuti Zen 3 inonetsa asi nguva yaizojekesa. Nezvazvino, mukana wemakwikwi uyo AMD une iyo Zen 2 yakavakirwa Ryzen 3000 yakangoita yakakura kwazvo kana ichienzaniswa chero neIntel iri mumasaga avo egore rino uye Zen 3 yakavakirwa Ryzen 4000 processors vari kuenda kushinira iyo envelopu kunyangwe.
AMD CPU Mugwagwa
akitekicha Zen (1) Zen (1) / Zen + Zen (2) / Zen + Zen (3) Zen (4)
Node Node 14nm 14nm / 12nm 7nm 7nm + 5nm?
Yakakwira End Server (SP3) EPYC 'Naples' EPYC 'Naples' EPYC 'Roma' EPYC 'Milan' EPYC 'Genoa'
Max Server Cores / Mahara 32 / 64 32 / 64 64 / 128 TBD TBD
Yepamusoro Yekupedzisira Desktop (TR4) Ryzen Threadripper 1000 Nhevedzano Ryzen Threadripper 2000 Nhevedzano Ryzen Threadripper 3000 Series (Nhare Peak) Ryzen Threadripper 4000 Series (Genesisi Peak) Ryzen Threadripper 5000 Nhevedzano
Max HEDT Cores / Mahara 16 / 32 32 / 64 64 / 128 64 / 128? TBD
Mainstream Desktop (AM4) Ryzen 1000 Series (Summit Ridge) Ryzen 2000 Series (Pinki Ridge) Ryzen 3000 Series (Matisse) Ryzen 4000 Series (Vermeer) Ryzen 5000 Series
Max Mainstream Makore / Threads 8 / 16 8 / 16 16 / 32 TBD TBD
Bhajeti APU (AM4) N / A Ryzen 2000 Series (Raven Ridge) Ryzen 3000 Series (Picasso 14nm Zen +) Ryzen 4000 Series (Mutariri) Ryzen 5000 Series
Gore 2017 2018 2019 2020 2021?
Chii chaunoda kuona mune AMD's inotevera-gen desktop CPU?
Yakakwira Clock Speeds
Yakakwira CPU Core Kuverenga
Zviri nani Mutengo / Performance
Yakakwirira Yekuwedzeredza Kubata Kugona
Zvitsva Zvekugadzira Zvimiro (DDR5 / PCIe5 / infinity Fabric 3.0 / nezvimwe)
Hezvino Zvese zvatinoziva nezve AMD's RDNA 2 Yakavakirwa Radeon RX Navi 2X Desktop GPU
The AMD RDNA 2 yakavakirwa Radeon RX Navi 2x mifananidzo yemakadhi Mhuri zvakare inopihwa kudzikisira iyo 4K mitambo yekutamba yakafanana neiyo Ryzen yakavhiringidza iyo yese CPU mamiriro. Icho chiitiko chakashinga chirevo kubva ku AMD ivo pachavo asi kuvuza uye runyerekupe vari kureva kuti izvi zvinogona kunge zviri izvo zve AMD-inotevera chizvarwa Radeon RX mifananidzo yemakadhi.
AMD yakaziviswa kuti yayo RDNA2 GPUs ichaunza yakafanana inomhanyisa kuruka pamusoro pekutanga-gen RDNA GPUs senge Zen 2 yakaunzwa pamusoro peZen 1. Yekutanga RDNA GPUs yakaunza hukuru hwemakumi mashanu muzana mukushanda kweiyo yeWatt pamusoro peGCN yekuvakira uye RDNA50 GPU inotarisirwa ita zvakafanana pamusoro peRDNA2, ununura imwe kuwedzera makumi mashanu muzana mukushanda pane watt.
Zvinoenderana nemugwagwa wakagoverwa ne AMD, iyo RDNA2 GPUs ichaisa zvinhu zvitatu zvakakosha izvo zvichave chikamu cheiyo GPU yekuvaka. Chekutanga uye chakanyanya kukosha ndiko kuita kwe watt kuwedzera iyo iri nekuda kwezvikonzero zvakati. AMD ichave ichichinja kubva muTSMC's 7nm process ikaita yakawedzera advanced 7nm process node. Iyo nyowani process node itself inowedzera transistor kunyatsoshanda paiyo GPU mitsva ichiderera kukura kwayo kose, ichibvumira AMD kuti ichipwanya basa rakawanda mupakeji diki.
Shanduko dzakakosha idzo dzakonzera kuwedzera makumi mashanu muzana mukushandiswa kwema watt inosanganisira yakagadzirwazve micro-architecture nekuvandudzwa kwekuita-pa-wachi (IPC), kusimudzira kwemafungiro kunobatsira kuderedza kusimba kwekushandura uye simba rekuchinja uye kugadziridza kwemuviri sekuwedzera wachi kumhanya.
AMD yakazivisawo kuti RDNA2 GPUs yaizoratidza VRS (Variable Rate Shading) & Hardware-yakakurumidza ray yekutsvaga. AMD iri kutevera sutu neNVIDIA pano avo vakatoisa matekinoroji akadaro pane ayo Turing GPU yakavakirwa GeForce RTX makadhi emifananidzo. Nekuvhurwa kwemanyaradzo matsva kubva kuMicrosoft uye Sony padhuze, AMD iri kuzoshanda kupa zvinhu izvi nehurongwa hwayo hwekugadzirisa kune vanogadzira kuti vabatanidzwe mukati meanotevera-chizvarwa mitambo yekutamba.
AMD zvakare yakaburitsawo yayo RDNA 2 GPUs ichimhanya Microsoft's DXR 1.1 (DirectX 12 API Ultimate) demo mukati iyo inoshandisa Hardware-yakawedzera ray kuteedzera. Maitiro e AMD ekutarisira ray ndeyokupa kukurudzira kusimudzira uye nekukurumidza kukurumidza kutora uye izvo zvinokwanisika kuburikidza nemakoni apo ruzhinji rwevagadziri vemitambo vanotarisisa zvavanoedza kuita.
CEO we AMD, Dr.Lisa Su, ane zvakataurwa kare kuti isu tinotarisira itsva RDNA2 GPU yakavakirwa Radeon RX yakakwirira-kuguma mhuri uye 7nm RDNA inozorodza mhuri kuvhura gore rino. Izvi zvakataurwa panguva yemharidzo yakange yakataurwa kuti iyo "Navi 2x" mutsara waizotangira kubva kumusoro uchienda pasi uye sezita rinoratidza, yaizounza kaviri hunyanzvi hwekuita kwakawedzera pamusoro peyekutanga-chizvarwa RX mifananidzo yemakadhi.
Q: Lisa, iwe unogona kutipa imwe pfungwa yezvinhu zvitsva zveGPU zvaunotarisirwa kuburitsa kune imwe 2020, yePC uye yedhi data?
LS: Ehe. Muna 2019, isu takatanga kuvaka kwedu nyowani muGPU, ndiyo RDNA yekuvakisa, uye ndiyo yaive yakagadzirwa Navi zvigadzirwa. Iwe unofanirwa kutarisira kuti izvo zvichazorodzwa muna 2020 - uye isu tichava inotevera-chizvarwa RDNA architecture iyo ichave chikamu chedu 2020 mutserendende. Saka isu tiri kufara pamusoro peizvozvo, uye isu tichataura zvimwe pamusoro pazvo pazuva redu rekuongorora mari. Padanho re data GPU, unofanirawo kutarisira kuti tichava nezvimwe zvigadzirwa zvitsva muhafu yechipiri yegore rino.
Nezvakataurwa, tatova kuziva a runyerekupe rwazvino iyo yakataura kuti AMD's yakakwira-kumagumo Radeon RX Navi GPUs inogona kukwira zvakapetwa kaviri nekukurumidza seNavi 10, ine hukuru hwekufa kwekukura uye GDDR6 memory. Zvimwe zvezvinhu zvekutarisira kubva ku2nd Generation RDNA Navi GPU zvinogona:
Optimized 7nm maitiro node
Enthusiast-giredhi desktop mifananidzo yemakadhi kadhi
Hardware-Level Ray Kutsvaga Kutsigira
Iko kusanganiswa kweGDDR6 uye HBM2 makadhi emifananidzo
Yakawanda-ine simba kupfuura Yekutanga-Gen Navi GPUs
Mifananidzo Credits: (@DaQuteness)
Chimwe chezvinhu zvakakosha pane Big Navi Radeon RX GPU ndeyekuti iri kuzovhiringidza chikamu che 4K chemitambo, zvakafanana nekuti Ryzen yakanganisa sei chikamu cheCPU. Izvi ndezvimwe zvirevo zvoushingi ne AMD asi kana izvo rumored specifications chero chinhu chinopfuura, ipapo izvi zvirehwa hazvingaiti kusvika kure.
"Nenhaurwa yeRadeon 5000-makuseni isu tiri kuvhara makumi mapfumbamwe-chimwe chinhu-muzana yevazhinji PC gamers nhasi," anodaro Chandrasekhar. "Uye saka ndicho chikonzero nei pasina 90K izvozvi, imhaka yekuti vazhinji vacho vari pa4p uye 1440p."
"Izvi hazvireve kuti 4P-inokwanisa GPU haisi kuuya, iri kuuya, asi pano uye izvozvi tinoda kutarisa kuwanda kwevatambi."
"Zvakafanana neRyzen," anodaro, "isu tese tinoda iririro yeRadeon GPU ecosystem. Saka, tiri kuenda mushure me4K, uye toenda zvakafanana kukanganisa 4K? Chaizvoizvo, iwe unogona kuvimba nazvo. Asi ndizvo chete zvandinogona kutaura izvozvi. ”
Zvakare, AMD mune yayo yemharidzo yakasimbisa kufarira-kirasi kuita kweiyo RDNA 2 yakavakirwa Radeon RX 'Navi 2X' GPUs saka ndicho chinhu chekufunga nezvacho. Makwikwi zvisinei kubva kune rimwe divi haangoendi maziso akavharika sezvo AMD inotanga ayo akakwira-maitiro emakadhi emifananidzo. The inotevera-chizvarwa NVIDIA yakavakirwa GeForce GPUs vari kuumba kuti vave chikara chavo pachavo zvichibva pane zvekutanga zvatakaona.
Chii chaunoda kuona mune AMD's inotevera gen genNA 2 GPUs?
Yakakwirira End (Endhusiast) Sarudzo
Kuita kuri nani pane kukwikwidza makadhi
Kukosha kuri nani pane kukwikwidza makadhi
Zvimwe Zvinyorwa (Ray Kutsvaga, New AA Sarudzo, nezvimwewo)
Zvirinani mareferenzi anotonhorera uye asina blower fan
Kuita kwakanaka pane watt pane kukwikwidza
Mhemberero dzakaratidzawo kuti NVIDIA yaizovavarira kunonoka kwe2020 izvo zvaizoreva kukwikwidza zvakananga neRDNA 2 yakavakirwa desktop mifananidzo yemakadhi. Saka zvinotaridzika seRyzen 4000 Zen 3 CPUs yaizokwikwidza kurwisa Intel's Rocket Lake-S uye AMD's RDNA 2 GPUs inokwikwidza kupokana nechero chii chinotevera NVIDIA GPU inotevera. Q3 neQ4 2020 zvirokwazvo ichava nguva dzinonakidza kune vese vanofarira zvemitambo uye mainternet PC gamers vari kutarisira kusimudzira maPC avo nemahara hepisi.
Iyo AMD Radeon RX 5500 XT Ongorora, Feat. Sapphire Pulse: Navi Ye 1080p